“ဟိုမှာလေ… ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့လေကွာ မင်းရှေ့မှာတင်လေ အေးလေ မင်းဘေးနားကလေ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ” – PoemsCorner
“ဟိုမှာလေ… ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့လေကွာ မင်းရှေ့မှာတင်လေ အေးလေ မင်းဘေးနားကလေ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ”
!!!ဟိုမှာကြည့်စမ်းခွေးတစ်ကောင် ရိုက်တဲ့လက်ကို လျှာနဲ့လျက်နေတယ်တဲ့**(မာယာကော့ဗ်စကီး)ဘောင်းဘီဝတ်မိုးတိမ်မှ..…
ဟုတ်တယ် တခါတရံ ကျွန်တော်တို့က ရိုက်တဲ့လက်ကိုမှ လျှာနဲ့လျက်တယ်
နာကျင်မှမြတ်နိုးတယ် အသည်းကွဲအောင်ရိုက်မှ အရိုးစွဲအောင်ချစ်တယ်
ခွေးနဲ့လူနဲ့မှာ တူညီတာတွေ အများကြီးရှိတယ် ကျွန်တော်က ခွေးနဲ့တူသောလူတစ်ကောင်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတ်ဖို့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ဂရန်းတစ်ဒေါင့် သူမနဲ့ဖုန်းတစ်ခါပြောချိန်
မှုန်ဝါးဝါးနဲ့လမ်းမ web cam တစ်ခု ဂျီတော့ချက်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု အသံဝဲ၀ဲ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဟုတ်ကဲ့~~~~ဟုတ်ကဲ့~~~~ကျွန်တော်သည်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လေသည် ကျွန်တော်သည် ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲတတ်လေသည် ကျွန်တော်သည်တစ်ချိန်ထဲမှာပင် လူဖြစ်ဖို့ အကြီးအကျယ်အားထုတ်နေလေသည် ကျွန်တော်သည် ဘောင်းဘီဝတ်မိုးတိမ်ထဲမှ ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လေသည်…။
In: ကဗျာ Posted By: myatthuraaung Date: Feb 19, 2012
အမေ အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမေ အမေ သားကိုနည်းနည်းလောက်နားထောင်ပေး
Leave comment 8 Comments & 387 views
နှုတ်ခမ်းမစူတစ်စူ မမဲ့တမဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြဿနာပဲ…. မိုက်စ်ဗျို့
By: ကြယ်စစ်သည် at Feb 19, 2012
bar hma nar ma le bu dot,,
title ko dot kyike de,,,/
By: ei lay at Feb 19, 2012
!!!ဟိုမှာကြည့်စမ်းခွေးတစ်ကောင် ရိုက်တဲ့လက်ကို လျှာနဲ့လျက်နေတယ်တဲ့**………………
ကျွန်တော်သည်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လေသည် ကျွန်တော်သည် ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲတတ်လေသည် ကျွန်တော်သည်တစ်ချိန်ထဲမှာပင် လူဖြစ်ဖို့ အကြီးအကျယ်အားထုတ်နေလေသည် ကျွန်တော်သည် ဘောင်းဘီဝတ်မိုးတိမ်ထဲမှ ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လေသည်…။
By: thetnaung at Feb 19, 2012
ဟုတ်ကဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုအကြား နစ်မျောပေးသောသူများအား
By: မောင်မြတ်သူ at Feb 20, 2012
By: အသဲကွဲမိုး at Feb 20, 2012
တစ်ခါတစ်လေမှာ ခွေးတွေက လူတွေထက်ပိုပါးနပ်တယ်
သူတို့အရိုက်ခံရရင် ရိုက်တဲ့လူကိုလုံးဝမှတ်ထားတတ်တယ် နောက်ဆို အဲ့လူရှေ့မှာလုံးဝမဆိုးရဲဘူး
ဒီကဗျာက အရေးအသားပုံစံကိုတော့သိပ်နားမလည်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို့မြင်ပါတယ် ။
By: X - ray at Feb 20, 2012
By: zawthetoo at Feb 20, 2012